केपी ओली अब फेरि कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन नपाउने ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > केपी ओली अब फेरि कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन नपाउने !
केपी ओली अब फेरि कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन नपाउने !
admin September 20, 2021 समाचार 0
काठमाडौ । नेकपा एमालेमा अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भएका छन् ।
एमालेको विधान संशोधन प्रस्ताव पास भयो भने ओली अब प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन् । ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन रोक लाग्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव आएका कारण त्यो लागू हुने गरी पास भए ओलीको प्रधानमन्त्रीको यात्रामा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।
आइतबार शुरु भएको स्थायी कमिटीमा पेश गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा सरकार प्रमुख दुई पटक भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ भने उमेरको पनि हद तोकिएको छ । एमालेमा एक पद एक नेताको कुरा पटक पटक उठ्दै आएको छ । साथै जिवनभर एउटै ब्यक्ति नेतृत्वमा रहन पाउने अवसर पनि अब नहुने भएको छ ।
स्थायी कमिटीमा आएको विधान संशोधन प्रस्ताव असोज १६ र १७ गते हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित भए ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैनन् । यद्यपि ७० वर्ष उमेर हद राख्दा पनि पार्टी अध्यक्ष भने एक पटक हुन पाउने छन् । ओली पटक पटक प्रधानमन्त्री बनीसकेका छन् । अब फेरी चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै सार्वजनिक भाषण समेत गर्ने गरेका छन् ।